Aminoo Asidii - Wikipedia
chemistry kessatti, amino acidiin molekulii amine fi carboxyl functional group kan ofii kessa qaba. biochemistry kessatti immo, maqaan kuni kan ibsuu alpha-amino acidotta formula waluma-galatti NH2CHRCOOH ofii kessa qabani dha. Molekulotni kuni immoo kuttan amino fi carboxylate jedhaman kan carbon tokkotii walitti qabataan yoo ta'an kuni immo α–carbon jedhamuu. Alpha amino asidonii garagara kan itti gargari ba'an garagarumma side chain (kutta R) alpha carbon isaanii irratti hunda'et. Garagarumman kunii immoo guddinan, diqicha hydrogen atom glycine kessatti argamu irra jalqabe, methyl group alanine kessatti argamu biraa darbee, hanga guddicha heterocyclic group tryptophan kessatti argamut ademma.
Phenylalanine standard amino acids kessa tokko dha
Alpha-amino asidoni proteiniin kan irrati hunda'e dha. Proteiniin kan umamuu yoo amino asidoni walit qabamaniin yoo ta'u kunis sansalata amino asid peptide bondiin walit qabaman umuudhan. Proteiniin gargara hunda, amino acid garagara ta'e ofii kessa qaba, tartibii kunis tartibaa protein tokkofaa dha. Akkumaa qubeen gargara waliti dhufaani maqaa garagara ummuu danda'anii hunda, amino asidoniis tartiba gargara gargaran walitti qabamanii proteinotta gargara ummuu ni danda'u.
Proteinotaa standard amino acids ta'an kan cellotan protein biosynthesis kessatti tajajilaman digdama (20)t jiru, isaanis kan himaman genetic code isaanitiin. Amino asidonii 20n kuni kan midhafaman molekulotta birra irra ta'ulee, Organizimotti gargara amino asid midhasu danda'aniin fi amino asiidonii nyattaa isaani kessatti barbachisuun gargari jirru. Gossi amino asid organizimotaan midhafamu hin dandenne essential amino acid jedhamani wamamu. Wikimedia Commons on Aminoo Asidii
↑ Proline garuu formula wal-galla kana alla dha. Innis kutta NH2 ta'ee hin qabu.
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Aminoo_Asidii&oldid=24047" irraa kan fudhatame
Last edited on 16 Adooleessa 2014, at 16:27
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 16 Adooleessa 2014, sa'aa 16:27 irratti.